OPAY DỊ EGWU: JIRI N50 GBAA KEKE ỊGA EBE ỌBỤLA – hoo!haa!!
OPAY DỊ EGWU: JIRI N50 GBAA KEKE ỊGA EBE ỌBỤLA
Enugwu: N’Enugwu, Opay bụzikwa ebeanọ. Usoro ime njem n’ụgbọ keke n’udịrị ọgbara ọhụrụ site n’ekwentị bụ ya na-ewuzi n’Enugwu ugbua.
Opay bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmadụ ime njem keke n’enweghị oke ihe nhịamahụ.
Ụlọ ọrụ a batara Enugwu n’ọnwa gara aga bụ ndị Opera Mini nwe ya. Ndị Chaịna bụ ha nọkwanụ n’isi ya.
Ndị nta akụkọ anyị gagharịrị n’Enugwu were chọpụta ihe ndị mmadụ chere banye ụlọ ọrụ ahụ.
N’okwu Mazị Chizobam Animba, onye nke bi New Haven, “Nnaa, Opay dị egwu! Sọọsọ N50, ha e buru m gaa ebe ọbụla. Ọ bugoduru ebe tere aka, a na ana N700 dịka Gariki.
“Nke ka nke bụ na nsogbu gị na ndị keke ịkọ akụkọ ‘change’ ma ọ bụ ikwe ọnụ adịghịzikwa”
Oriakụ Ndidi Ekwueme, onye bi Emene sị na ọ bụ ya onwe ya ka Opay kacha baara uru.
“O nweghị onye keke Opay bara uru karịa m. Ugbua, ọ dịzịịrị m mfe isi Emene ga ebe ọbụla m chọrọ ịga n’ime Enugwu. Sọọsọ ihe ọ ga-efu m bụ N50”
Obi dịkwa ndị keke ụtọ maka opay maka na o mere ha a karazịa ịgbata ego n’enweghị oke mgbakasị ahụ. Onye bara keke kwuo N50, ndị opay emezuziere onye keke ego fọrọ n’ihe ọ kwesịrị ịna onye ahụ maka njem ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ na njem ísì New Haven gaa Gariki bụ N700. Onye bara keke kwụọ ndị opay N50 ha akwụzịa onye keke N700.
Ọzọkwa, ndị Opay nyere ndị keke nile sonyere ha ekwentị ọhụrụ. Ha na-ejikwa kọmputa etinyere ndị keke ahụ anya iji hụ na ha anaghị agba waa waa waa. Iwu ha bụ na onye keke agaghị agha ọsọ karịa kilomita iri atọ kwa elekere. Ị gaghịkwa agbafe ma ọkụ nhazi njem chaa mmee mmee. Onye keke dara iwu ọbụla n’ime ndị a, ebepu ego ya iji daa ya nha.
Mana ndị keke amụtawo nke ọjọọ ya. Ha anaghị ekwe ebu ndị na-aga ebe dị nso maka na ego anaghị adị ya ka ibu ndị na-agate aka. Ndị na-eme njem na enyezi mkpesa na oge ọbụla ha chọrọ ka keke opay buga ha ebe dị nsọ, na o nweghị keke na ekwe aga. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike iche ihe ruru nkeji iri abụọ na ahụghị keke ga-ekwe buru gị.
Kaosiladi, ọ bụrụ njem tere aka, ịga enweta keke opay ozigbo.
Previous Post: AKWA(EGG/CRY/CLOTH/BED)
Next Post: NNUKWU ỌDỊICHE N’ỤGWỌ ỌRỤ NDỊ ỌCHỊCHỊ NA NDỊ ỌRỤ NDỊ ỌZỌ BUTERE MPỤ NA NAỊJIRIYA – GLORIYA OKOLUGBO